Sintomy, havaozy ary apetraho ny Play Store | Androidsis
Sintomy ny Play Store 4.0.26 sy ny kinova taloha
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka ary misaotra an'ireo mpiara-miasa amin'i Android Polisy, Te hizara aminareo rehetra aho ny dikan-teny farany, hatramin'izao, avy amin'ny fivarotana fampiharana Android amin'ny kinova misy azy Play Store 4.0.26.
Amin'ny lahatsoratra hafa dia efa nandao anao aho ny kinova teo aloha teo, ary koa ny horonan-tsary ho an'ny fametrahana azy ary ny fampisehoana an'ity famolavolana vaovao an'ny fivarotana app android.
Ny hany maharatsy an'ity Play Store 4.0.26, dia ny any ivelan'i Etazonia, tsy ho hitantsika ny atiny asongadina na sosokevitra google, raha tsy izany dia mandeha tanteraka ny zava-drehetra ary miasa tanteraka.
Amin'ity kinova vaovao ity dia tsy hanana fanovana mahavariana amin'ny endrika izy, raha tsy izany fanatsarana ny fampisehoana ary ny fandaminana ny lesoka kely avy amin'ny kinova taloha.
1 Fomba fametrahana
2 Fampivoarana teo aloha an'ny Play Store
3 Sintomy ny tsimbadika farany avy amin'ny Play Store
4 Ahoana ny fampidinana kinova taloha avy amin'ny Play Store
Ny fomba fametrahana dia tsy manana olana lehibe noho ny ampidino ny apk ary mihazakazaha izany amin'ny alàlan'ny fitetezana ny làlan'ny fampidinana misy File Browser, tsy mila mpampiasa root akory isika, tsy maintsy manana ny safidintsika fotsiny avelao ny fiaviany tsy fantatra avy amin'ny fipetrahana ny terminal izay hametrahantsika ity kinova vaovao ity.
Fampivoarana teo aloha an'ny Play Store
Ho an'ireo nostalgika rehetra izay maniry fatratra ny kinova taloha Play Store, Android Polisy Manome antsika rohy fampidinana koa izany:
Toy ny rehetra apk's mila maka tahaka azy ireo fotsiny ianao ao amin'ny karatra sd ary mihazakazaka miaraka amin'ilay mpikaroka rakitra tianao.
Raha mametraka ny kinova farany ianao ary tsy tianao fotsiny izany ary te hiverina amin'ny kinova taloha napetrakao ianao dia tsy ilaina ny misintona apk iray fa mandehana fotsiny Fikirana / fampiharana / Play Store ary safidio ny safidy ny esory ireo fanavaozana.
Sintomy ny tsimbadika farany avy amin'ny Play Store
Misy angamba efa misy kinova vaovao an'ny Play Store, fa tsy noraisinao. Amin'ity tranga ity dia mila manohy manavao amin'ny tanana ianao mba hahafahanao miditra amin'ity kinova ity. Izany dia zavatra tsotra atao, izay azontsika atao amin'ny dingana vitsivitsy. Mila miditra voalohany amin'ny rindrambaiko finday Android aloha isika.
Rehefa ao anaty isika dia mankany amin'ny toerana misy azy. Misosa ny menio ilan'ny rindrambaiko izahay ary mampiditra ny safidin'ny fikirana. Avy eo dia midina isika mandra-pahatongan'ny Andao ho hitantsika ny fizarana kinova amin'ny Play Store. Mila tsindrio fotsiny isika, hahitana raha tena manana ilay kinova nohavaozina isika. Raha tsy izany dia holazaina amintsika fa tsy manana ny kinova farany farany izahay ary asaina manafatra ilay vaovao. Ka tsy maintsy miroso amin'ilay fisintomana fotsiny isika.
Ka ao anatin'ny segondra vitsy efa hanana ny kinova vaovao amin'ny Play Store izahay amin'ny finday Android. Ity dia zavatra mety hitranga indraindray, tsy nahazo ny fanavaozana isika, fa tena mora ny manery ny telefaona tsy maintsy mitady azy sy misintona azy.
Ahoana ny fampidinana kinova taloha avy amin'ny Play Store
Mety nanome olana antsika ny fanavaozana ny tsimbadika vaovao amin'ny Play Store. Raha izany, ny zavatra tsara indrindra dia miverena amin'ny kinova taloha, mba hiasa tsara amin'ny finday Android daholo ny zava-drehetra. Mampalahelo fa tsy afaka miverina amin'ny kinova taloha toy izany isika, saingy mila misintona APK iray isika.
Satria ny fivarotana ofisialy dia tsy mamela antsika hiverina amin'ny kinova taloha raha nanavao izahay. Ny fampiasana APK dia safidy tsara amin'io lafiny io, satria afaka miditra amin'ilay kinova teo aloha isika. Misy fivarotana maro izay ananantsika APK, toy ny APK Mirror. Ao amin'io no mila mitady ny kinova Play Store izay tiantsika apetraka amin'ny telefaona fotsiny. Avy eo dia mila misintona ilay rakitra resahina fotsiny isika.
Araka ny efa nolazainay taminao teo, Hampidina APK tsy maintsy manana ny safidin'ny "fiaviana tsy fantatra" isika ao amin'ny fikirana alefa. Io dia ahafahantsika misintona fampiharana izay tsy mahazatra ao amin'ny Google Play. Raha vantany vao vita izany, dia afaka maka ny APK isika ary mampandeha azy toy ny rehefa misintona fampiharana amin'ny telefaona na solosaina isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Sintomy ny Play Store 4.0.26 sy ny kinova taloha
Ricardo Mendz dia hoy izy:
Fanontaniana iray miaraka amin'ity kinova vaovao ity ve azoko atao ny mandoa ny drafi-bola izay nifanarahana tamiko?
Valiny tamin'i Ricardo Mendz
angie dayana muñoz madonado dia hoy izy:
Valio angie dayana muñoz madonado
Alan dia hoy izy:
Mamaly an'i alan
Tsy ilaina ny manao SU? Ho an'ny Android 2.3.4 koa io?
abner rivera dia hoy izy:
Mamaly an'i abner rivera
ho an'ny rahavaviko
Valio amin'i elizabeth
Manantena aho fa hiarahaba anao avy any Brezila
Juan Enrique Rosales Gomez dia hoy izy:
Manantena aho fa mety ho ahy koa io, arahaba avy amin'i Monterrey
Mamaly an'i juan enrique rosales gomez
Manantena aho fa tsara izany
Mamaly an'i erika
Lahatsoratra tena tsara. Betsaka amintsika no tsy maintsy nampidina ny Google Play Store amin'ny fitaovana Android. Raha tianao ny misy ny kinova farany azo alaina ao amin'ny Play Store, mamporisika anao aho hampidina ny rakitra APK eto: http://playstoredescargar.org/
Nanaraka an'ity fampianarana ity aho fa nampidina ilay rakitra tao satria io no kinova farany ary mitondra fanatsarana kely izany. Manantena aho fa manampy anao izany.
Q ero gugarhbbvxgjkgdcbmm hhfxtjkug gvhhbklkhcd busvb k jrn fjn fhj cfj vs bbuh vij bghibvvgyb ughibvfv sv a vub scb sd ooo wwejk ad
Salama daholo, manao ahoana?
Alfredo dia hoy izy:
Salama daholo, misaotra tamin'ny fanasana
Nova 40 Series 5-Watt Fast Charge Technology Voamarina
Samsung Galaxy 10 Note Tesla Edition, fanontana voafetra an'ny avo lenta izay mety ho tonga